I-3D2B Furnished Apartment yeengcali okanye ootitshala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKelly
ISebe. Ibekwe kwikhondomu phambi kwekhampasi yaseLircay yeDyunivesithi yaseTalca. Ukufikelela kulula ukusuka kuhola wendlela, oku-1 km kude.
Icondominium izolile kakhulu, ikhuselekile kwaye ine-concierge 24/7.
Ngesithuthi kuya kuthatha imizuzu eyi-10 ukufikelela kumbindi wesixeko, inokufikelela kwi-locomotion yoluntu.
Inendawo yokupaka e-1 ngaphakathi kwikhondom. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo, ine-Air Conditioning, i-400 Mb yeFiber Optic WiFi, iCable kunye neNetflix.
Isebe libekwe kumgangatho wokuqala, eyona nto iphambili lijolise kuyo ekumntla, nto leyo eqinisekisa ukukhanya kwendalo nangaliphi na ixesha lonyaka. Ukuzola kunye nokukhuseleka kwendawo, i-campus enhle yeYunivesithi yaseTalca yongezwa, ephambi kwaye ihlala ivulekile kuluntu.
Sinamagumbi okulala ama-3, iibhedi ezitofotofo, kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokuhlala kamnandi.
Songeza kwizixhobo, i-Air Conditioning, i-Cable TV, i-NETFLIX, i-400 Mb ye-Fiber Optic WiFi, amashiti, iitawuli, i-washer yeempahla, isomisi seenwele, i-iron yeempahla, i-shampoo, isepha, phakathi kwabanye. Sikwanayo ne heater Toyotomi ukuphucula intuthuzelo.
Ikhitshi nayo ixhotyiswe kakuhle kakhulu, kwaye uya kuhlala ufumana iti kunye nekofu ekufikeni kwakho.
4.92 ·Izimvo eziyi-138
I-Condominium iphambi kwe-Lircay Avenue (ilungiswayo ngoku), nangona kunjalo, izolile kwaye ikhuselekile. IYunivesithi yaseTalca ibonelela ngendawo yendalo enomtsalane kakhulu kunye nokufikelela koluntu, ukongeza kwimekobume yeDyunivesithi, ikuvumela ukuba ube namashishini ahlukeneyo asekuhlaleni kunye nevenkile enkulu yokugcina impahla.
Kwindlu uya kufumana ukuzimela ukuba ungene kwaye uhambe nangaliphi na ixesha. Ungathembela kuthi ukuba sikuxhase kumathandabuzo malunga nesixeko, ilizwe okanye nantoni na oyifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Talca